မြေပဲယိုလေးတကိုက်နှစ်ကိုက် (၈) – Cost-Cutting ချွေတာတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြေပဲယိုလေးတကိုက်နှစ်ကိုက် (၈) – Cost-Cutting ချွေတာတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာလား	12
မြေပဲယိုလေးတကိုက်နှစ်ကိုက် (၈) – Cost-Cutting ချွေတာတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာလား
Posted by padonmar on Jun 13, 2016 in Business & Economics, Creative Writing, Environment, Money & Finance, My Dear Diary, Society & Lifestyle, Travel | 12 comments
တချိန်တုံးက အစိုးရရုံများမှာ ကပ်ထားတဲ့ (ကပ်ရုံကပ်ပြီး မလိုက်နာတဲ့) ဆောင်ပုဒ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဥပမာ- လာဘ်ပေးရန်မလို၊ ကူညီပါရစေ။…စသည်စသည်ပေါ့။
အဲဒီထဲ TV မှာပါ လွှင့်တဲ့ ဆောင်ပုဒ်တခု ရှိသေးတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ကပ်ထားပြီးရင် လိုက်နာဖို့ မလိုဘူးလေ။
-ရေဆို ခွက်အပြည့်ထည့်သောက် ၊ပိုတာကို ဘေးပက်ထည့်လိုက်ရုံ။
ပလပ်စတစ် တခါသုံးခွက်နဲ့ သောက်ရင်လည်း ပလပ်စတစ်ခွက်ဟောင်းတွေ တောင်ပုံရာပုံ အမှိုက်ထဲသာရောက်။
-လျှပ်စစ်ကလည်း လူမရှိတဲ့ လမ်းမကြီးတွေမှာ ထိန်ထိန်ညီး။
ရုံးခန်းမီးတွေ ရုံးဆင်းသွားရင် နေ့အလားဖွင့်ခဲ့။
အလုပ်မလုပ်လည်း ပပ၀တီတွေက ခုနစ်ဆောင်တိုက်ခန်း မလင်းမှာစိုးလို့ အပြည့်ထွန်း၊
(မီတာခလာတော့မှ ကိုယ့်အိမ်ဆို အမေက များတယ်အော်၊
အများဆိုင်နေရာဆို သိတောင်မှ မသိလိုက်ကြ။)
-လောင်စာကတော့ တတောလုံးပြောင်ပြီး ရေကြီး မြေပြိုတောင် ဖြစ်နေပြီလေ။
ကိုယ့်ထက် အဆများစွာ ချမ်းသာတဲ့ မြေပဲတိုင်းပြည်မှာ…
ရေပူရေအေးစက်ဘေး ကပ်ထားတဲ့ တခါသုံးရေခွက်က စက္ကူ သေးသေးလေးကို ကတော့ပုံခေါက်ပေးထားတယ်။
ရေလည်း အပိုအများကြီး ထည့်သောက်လို့မရအောင် ထိန်းပြီးသား။
ကမ္ဘာ့မြေဆီလွှာကို ဒုက္ခပေးမယ့် ပလပ်စတစ်ခွက်လည်း မဟုတ်၊
ဆွေးမြည့်လွယ်တဲ့ စက္ကူ။ဒါတောင် ကြီးကြီးမဟုတ်။
-Marks & Spencer department store က ဈေးဝယ်အိတ်မှာ Please reuse to help protect the environment လို့ ရေးပြီး စက္ကူအိတ်တွေကို အထပ်ထပ်ပြန်သုံးခိုင်းတယ်။
-ထိုင်ဝမ်ဒီပ ဖားအောက်တောရကျောင်းမှာ တံပျက်စည်းက ၀ယ်မသုံးပါဘူး။
သစ်ခက်ခြောက်တွေကို စုစည်းပြီး တံပျက်စည်းလုပ်သုံးတယ်။
(တရုတ်ပြည် ရွှေလီကျယ်ဂေါင်ဖက်မှာလည်း အဲသလို သစ်ခက် တံပျက်စည်း သုံးတာ Ko Pauk Mandalay ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲ တွေ့ဖူးပါတယ်)
ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ ရှေးက ဘိုးဘွားမိဘတွေရဲ့ အိမ်တွင်းဖြစ် အုန်းလက် တံပျက်စည်းတွေအစား အလွယ်ရတဲ့ ပလပ်စတစ်တံပျက်စည်းတွေ ၀ယ်သုံးလာပြီ။
ရှေးက အမေတို့ အဖွားတို့ အကျီင်္ချုပ်လို့ ပိုတဲ့ ဖြတ်စတွေကို ကြက်မွေးလုပ်၊ခြေသုတ်လုပ်ပြန်သုံးတာတွေ လုံးဝနီးပါး ပျောက်ပြီး တရုတ်က ယိုးဒယားကလာတဲ့ မော်တာကြမ်းသုတ်တံတို့ ပလပ်စတစ်ကြက်မွေး၊ပလပ်စတစ် ခြေသုတ်တို့ အစားထိုးပြီး အလွယ် ၀ယ်သုံးကုန်ပြီ။
-ထိုင်ဝမ်ဖားအောက် ကျောင်းမှာပဲ ပုလင်းလေးထဲ အသီးတွေ စိမ်ထားတာ တွေ့လို့ စပ်စုတော့ အပင်တွေက ကြွေကျတဲ့ အသီးတွေကို (လူမစားတာတွေပါ) အလဟဿ အဖြစ်မခံပဲ ကောက်ပြီး Chemical တခုထည့်စိမ်ထားရင် ဆပ်ပြာရပါတယ်တဲ့။ ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာအဖြစ်သုံးတာပါ။
ကျမတို့ အမေတွေ အဒေါ်တွေ သံပုရာသီး ညှစ်ပြီးရင် အခွံလေးကို ဆားနဲ့ထပ်၊လေလုံအောင် သိမ်းထားပြီး သံပုရာသီးသနပ် လုပ်စားကြတယ်။
အခုတော့ အဲသလို လုပ်ပြရင်လည်း အိမ်မှာ ဆက်လုပ်မယ့်သူမရှိတော့ဘူး။
Shopping center ကပဲ အလွယ်တကူ ၀ယ်စားကြတော့တယ်။
-တချိန်က India လွတ်လပ်ရေး ရခါစမှာ ဟိုတယ်တွေမှာတောင် အာလူးဟင်းကလွဲပြီး အကောင်းစားဟင်းအမယ်များစွာ မှာစားခွင့်မရှိဘူးလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။တိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေသေးချိန် ဖြုန်းတီးခွင့် မပေးတာပါ။
(အခုနေများ အဲသလို အမိန့်ထုတ်ရင် သံခမောက် ဆောင်းထားရပါလိမ့်မယ်)
ကိုယ့်ထက် အစစအရာရာ ချမ်းသာနေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာတောင် မကုန်သင့်တာ မကုန်ရအောင် ချွေတာနေကြသေးရင် ကျမတို့ ရွှေကျောင်းပြောင်ပြောင် ၀မ်းခေါင်ခေါင်နေတဲ့ မဟာရွှေပြည်တော်ကြီးမှာရော ချွေတာတယ်ဆိုတာကို ရှက်နေကြအုံးမှာပါလား လို့ မေးစမ်းချင်ပါတယ်။
(Paper cup Photos -credit to Hnin Wut)
ခင်ဇော် says: Innisfree ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားဆိုင်မှာဆို ပစ္စည်းဝယ်ပြီး အိတ်ယူမလား မေးတယ်။
အိတ်မယူဘူးဆိုရင် Handcream လေးတွေ ပေးတယ်။
ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ အိတ်မတောင်းတော့ပဲ သူတို့ Handcream လေးတွေပဲ ယူတယ်။
အဲဒီ ဘူးတွေ ကုန်ရင် လွှင့်မပစ်ပဲ သူတို့ ဆီ ပြန်လာပေးရင် ဒစ်စကောင့်ပေးတယ်။
ဂျစ်စူ says: ရှက်ဘူး shark bull
kai says: ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. သောက်ရေသန့်ဗူးအပါအ၀င်.. အချိုရည်ဗူး၊ ဘီယာဘီ၊ပုလင်းစတာတွေမှာ.. စာကလေးကပ်ထားပေးတယ်..။
အဲဒါပါတဲ့ ဗူးတွေကို.. ပြန်သွင်းရင်.. ပိုက်ဆံပြန်ရတယ်..။
ကျောင်းသားကလေးတွေကို မုန့်ဖိုးရအောင်လုပ်တဲ့နည်းအပြင်.. ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းတတ်အောင် သင်သွားပေးတာပါပဲ..။
မြန်မာပြည်မယ်.. ရေမြောင်းပိတ်နေတာတွေကို.. ကြည့်တော့.. ပလပ်စတစ်ဗူးခွံတွေတော်တော်များနေတာ သတိထားမိတယ်..။
ယူအက်စ်လိုနည်းကို ကော်ပီယူသင့်တယ်လို့ထင်..။ Beverage Container Recycling Home Page – CalRecycle
May 9, 2014 – Beverage containers covered under the act are subject to California Redemption Value (CRV), which is5cents for containers less than 24 ounces, 10 cents for containers 24 ounces or larger.
‎FindaRecycling Center · ‎Recyclers · ‎Biannual Report of Beverage … · ‎Retailers
Thint Aye Yeik says: တစ်ခါသုံး သောက်ရေခွက်ကို စက္ကူ လေးနဲ့ လုပ်ထားကို သဘောကျချက်…
ဒီမှာလည်း အဲ့ဒါမျိုး လုပ်ရင် ကောင်းမယ်။ .ကျနော်တော့ အဆောင်မှာ နေတာ.. လူပေါင်းစုံ စုနေရတော့…တော်တော်များများဟာ စွမ်းအင် ချွေတာရ ကောင်းမှန်းလည်း မသိကြ…ရေ ချွေတာရကောင်းမှန်းလည်း မသိကြ…
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘယ်ထောင့် ဘယ်နေရာကိုမှ ချွေတာ ပေးရကောင်းမှန်း၊ ကယ်တင် ထိန်းသိမ်းပေးရကောင်းမှန်း မသိကြတဲ့ လူငယ် လူရွယ်တွေ တပုံကြီးကို နေ့စဉ် မြင်နေရတာ…. သွားတိုက်ဖို့လုပ်ရင်… ဘေစင်က ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်ချလိုက်တယ်။
သွားတိုက်ဆေးကို ရေစိုအောင် တစ်ချက်တို့ရုံပဲ…တို့တာကို…။ တို့အပြီးမှာ..ရေပိုက်ကို ပြန်မလှည့် မပိတ်…။
ဆိုတော့…သွားတိုက်နေစဉ် နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်အတွင်းမှာ…ဘေစင်ထဲ…ရေတွေ ကျနေတာ..အလဟသ…
ကျနော့်မှာဖြင့် ဘေးကနေ မြင်နေရရင်..နှမြောလိုက်တာ…။ မီးတွေဆိုလည်း..မလိုအပ်ပဲ…အိမ်သာထဲလည်း ထိန်နေအောင် ဖွင့်ထားတာ။
အမှန်ဆို…အိမ်သာထဲ ဝင်ခါနီးမှ ထောက်ခနဲ ဖွင့်ပြီး ဝင်လိုက်လည်း ရတာပဲ။
အိမ်သာထဲက ပြန်ထွက်တဲ့အခါ…အပြင်ဘက်ကနေ မီးခလုပ်ကို ပိတ်ခဲ့ရုံနဲ့ စွမ်းအင်ကို ချွေတာတဲ့သူ ဖြစ်သွားမှာကို မတွေးကြ။ ဒါ..ကျနော်နေတဲ့ အဆောင်တစ်ခုထဲမှာပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ..ပြင်လို့ ရတယ်။ သူတို့ကို…အစစအရာရာ လိုက်ပြောနေရင်..ရန်ချည်း ဖြစ်နေရမှာမို့…
ဒါမယ့်…ကိုယ် လုပ်သလို…ရေတွေ မီးတွေ ချွေတာတာကို…လိုက် ချွေတာတဲ့ ချာတိတ် တစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ ရှိတာ အမြတ်။ သူများနိုင်ငံတွေ တိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာ…
သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းကိုက…အစကတည်းက မနိမ့်ကျခဲ့လို့…လို့… မြင်နေမိတယ်။ ကျနော်တို့မှာတော့….
အောင် မိုးသူ says: ဟိုးအရင်မြန်မာက လူကြီးတွေက ကိုယ်တွေ ပိုချွေတာ ပိုစည်းကမ်းရှိကြသလားလို့နော်။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ဆိုလည်း သုံးပြီးသားလေးတွေ လှမ်းပြီး အခြောက်ခံ ပြန်ခေါက်သိမ်းထားတယ်။ ထမင်းတွေ ပိုရင် ထမင်းခြောက်လှမ်းထား ဘူးထဲထည့်ထားတယ်။ သံပုရာသီး နည်းနည်းပုပ်တာလေးတွေ သန့်စင်ပြီး ဆားစိမ်ကြတယ်။ နောက်အရင်တုန်းက ကျွတ်ကျွတ်အိတ်သိပ်မသုံး သတင်းစားစက္ကူရယ် အင်ဖတ်တွေ သုံးတယ်။ အဲ့ဒါတွေကအစ။
kai says: အဲဒီတုံးက.. သယံဇာတတွေထုတ်မရောင်းသေးတော့.. ပိုမွဲတယ်လေ…။
နောက်…သတင်း..မီဒီယာတွေမှာလည်း.. ပြည်တွင်းမကောင်းသတင်းတွေမဖေါ်ပြသမို့.. မြန်မာဆိုတာ.. ကမ္ဘာမှာ..အယဉ်ကျေးဆုံး.. အငြိမ်းချမ်းဆုံး.. သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမရှိတဲ့.. မေတ္တာတိုင်းပြည်ကြီးလို့လည်း.. ထင်သပေါ့..။
နိုင်ငံခြားဆိုတာ.. အင်မတန်ရိုင်းစိုင်းတဲ့သူတွေနေတယ်ထင်တာကိုး..။ ( ကျုပ်လည်းပါခဲ့သဗျ… )
နိုင်ငံခြားက.. တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းလေးတအုပ်ရရင်ပဲ… စာအုပ်အဖုံးလုပ်ရ.. အမြတ်တနိုးနံရံမှာကပ်ရလည်း ဖြစ်ခဲ့လောက်အောင် ပစ္စည်းရှား/မွဲခဲ့တာကိုး…။ အခုက.. သယံဇာတ..မြေပေါ်မြေအောက်အကုန်ထုတ်ရောင်းနေတော့.. နည်းနည်းလုပ်အား.. ပြောအားရှိလာသပေါ့..။ ရန်ကုန်ရောက်တုံး.. ဆိပ်ကမ်းအ၀င်အထွက်တွေလေ့လာကြည့်နိုင်ခဲ့တာ… ရင်ထဲနင့်နေတာပဲ..။
အိပ်စပို့.. ဇီးရိုးရက်တွေ.. အများးးးးကြီး…။
သဘောင်္တွေက.. ကုန်အ၀င်ပဲရှိတယ်.. အထွက်ခါလီပြန်ကြရတာ….
အင်း.. ဘိန်းသာမကယ်ရင်.. မြန်မာပြည်.. ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးကို.. ၂ပြန်ဖြတ်အောင်မွဲတယ်..။
ရှက်ရှက်တို့ရဲ့.. ရှက်စရာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကြုံတုန်း အာတီဒုံ ကြီးနောက်ဦးမှ။ အမြတ်ခွန်ရုံးရှေ့မှာ နေတဲ့လူဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ သိတာပေါ့။ အိမ်တစ်လုံးရောင်းရင် အမြတ်ခွန်သွင်းရတယ်။ ၁၅သိန်း သွင်းရမှာကို နားလည်မှုနဲ့ ၇သိန်းပဲ သွင်းလို့ ရတယ်။ အဲဒါ ချွေတာရေးလား ဟိဟိ။
kai says: အမေရိကားကျ.. အခွန်ဆောင်ပြီးငွေဖြူဖြစ်နေဖို့ ပိုအရေးကြီးသမို့.. အခွန်ဆောင်ဖို့ငွေပေးတာကို ပိုထက်သန်ကြတယ်..။
သဘောက..အိမ်တလုံးရောင်းလို့.. ၁၅သိန်းအမြတ်ခွန်သွင်းရင်.. အခွန် ၃၀%ဆိုပါစို့..။
ငွေဖြူ သိန်း၅၀-၁၅သိန်း = ၃၅သိန်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်..။
ရသိန်းပဲသွင်းတော့.. ငွေဖြူ.. သိန်း၂၀ကျော်ကျော်ပဲဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်…။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အိမ်မှာဆို ကိုယ်က ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးကို ရေဆေးပြီး ချိတ်ထားရင် ရေတစ်စက်စက်ကျနေတာ ရှုပ်တယ်ဆိုပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်ပစ်တယ် . . Change ဆိုတာ လုပ်ဖို့ဆိုရင် ပါဝါရှိဖို့လိုတယ်လို့ ထင်မိတယ် . . . လောလောဆယ်တော့ recycle paper bead jewelery တွေလုပ်ဖို့ အားသန်နေတယ် . n .
ဦးကြောင်ကြီး says: ခိုနီဒုံဂျီးကို မစန့်ကျင်ကြ…
uncle gyi says: ချွေတာတာသိတဲ့နေ့မြန်မာပြည်တိုးတက်တဲ့နေ့ပဲ
kai says: ချွေတာကြတဲ့နေ့လို့မရေးပဲ.. သိတဲ့နေ့လို့ရေးသမို့.. ကျေးဇူးတင်..။
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးသားတွေက.. ချွေတာတာကို သိတာ…။
တချို့ဟာတွေကျ.. မချွေတာဘူး..။ တမင်ကို သုံးပစ်ဖြုံးပစ်တယ်..။ အစိုးရက.. လူတွေသုံးအောင်ဖြုံးအောင်.. ပေါ်လစီထားလုပ်တယ်..။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းကို ဖေါ်နိုင်အောင်.. တယောက်ယောက်အလုပ်ရသွားအောင်.. ရည်ရွယ်လုပ်တယ်..။ တပြိုင်ထဲ.. နိုင်ငံကြီးသားစိတ်..။ ကမ္ဘာမြေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကိုလည်း.. မွေးမြူတယ်..။ သိထားတယ်..။
မနက်ဖြန်.. သို့မဟုတ်.. ဘယ်သောအခါ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.